Amakhaya we-HT | I-United Kingdom Franchises | I-Franchiseek
»Amathuba weFranchise»I-HT Homes Franchise
I-HT Homes Franchise
Thola i-franchise yezindleko eziphansi egxile ekuthengiseni, ekuphathweni nasekuphathweni kwempahla - ngaphandle kwemali ye-franchise!
HT Amakhaya Franchise
I-HT Homes yibhizinisi elizimele le-estate estate e-UK eligxile kwezentengiso, ukuvumela nokuphatha. Ngenxa yesidingo esikhulayo, Amakhaya we-HT afuna abantu noma amaqembu afisa ukuletha umndeni we-HT Homes endaweni yangakubo njenge-franchise. Nge-franchise ye-Homes Homes, uzohlomula ngemifudlana engenayo engu-4 okuyi:
Ukuthola indawo yokuhlala
Sakhe Amakhaya we-HT kusukela ekuqaleni ngokuba phambili, ukwethembeka nokusobala ikakhulukazi uma kukhulunywa ngohlangothi lwemali lwebhizinisi lethu. Ngokungafani nomsebenzi wendabuko we-9 - 5, onamakhaya e-HT, lapho ufaka umzamo omningi, kulapho uphuma kakhulu ebhizinisini lakho. Ukuthola imininingwane ephelele ngokuthola amandla nokutshalwa kwemali, sicela ubuze ngezansi ukuthola iphakethe lethu lemininingwane.
Yini Okufakiwe ne-HT Amakhaya I-Franchise?
Lapho ujoyina Amakhaya we-HT, uzothola amathuluzi angezansi wokukusiza ukhulise ibhizinisi lakho lenhlangano entsha.
10 Isoftware ejensi yezindawo ezingamashumi ayisishiyagalolunye
Isoftware yeFloorplan kanye nokuhlola
Ukwesekwa kokuqasha - Ukuhlolwa Kwamakhredithi, Ukureferensa
Ukusekelwa kokuphathwa kwezingcingo
Ucingo olulodwa oluzinikele olunezingcingo zamahhala zomhlaba wase-UK
Ungashiya noma kunini (Akunasivumelwano esiboshiwe)
Ayikho Imali ye-Franchise
HT Amakhaya Ukuqeqeshwa Nokwesekwa
Uzothatha izinyathelo zakho zokuqala esifundweni esinamandla sokungenisa lapho uzofunda khona konke okudingekayo ukuze ube umenzeli omkhulu wezindlu kanye nelungu lomndeni we-HT Homes. Ukuqeqeshwa kufaka:
Ungalimaketha kanjani ibhizinisi lakho futhi wakhe umkhiqizo.
Uyazisa kanjani impahla.
Ungalakha kanjani uhlelo lwaphansi lwesakhiwo.
Ungazithatha kanjani izithombe zekhwalithi esezingeni eliphakeme.
Ungayibhala kanjani imininingwane ecacile necindezelayo futhi uyihlu ngempumelelo.
Izindlela ezinhle kakhulu zokuxoxisana egameni leklayenti lakho.
Ukwesekwa kuhlale kukhona uma unanoma yimiphi imibuzo ngezici ezithile zokuqhuba ibhizinisi, nge-imeyili nangocingo.
Ukuthola imininingwane eyengeziwe mayelana ne-HT Homes franchise, sicela uchofoze ngezansi ukuze wenze uphenyo. Sizokuthumela imininingwane eyengeziwe mayelana nokutshalwa kwezimali, okuhlanganisiwe, ukuhola okungaba khona nokuningi. Akubizi lutho ukubuza, ngakho-ke thintana namuhla uthathe isinyathelo sokuqala ekusaseni lakho eliyimpumelelo!